အမျိုးသားများ၏လိင်တံအရွယ်အစားသိမြင်နားလည်မှုနှင့်လိင်တံတိုးပွားမှုကိုခံယူရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်လူမှုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု - အရည်အသွေးဆိုင်ရာလေ့လာမှု။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
penile တိုးပွားခံယူဖို့အမျိုးသားများရဲ့လိင်တံအရွယ်အစားသဘောထားအမြင်ဆိုင်ရာနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် Sociocultural သွဇာမြား: A အရည်အသွေးလေ့လာမှု။
ဗေဒမြင့်တက်ဂျေ 2019 မေလ 20 ။ pii: sjz154 ။ Doi: 10.1093 / asj / sjz154 ။
Sharp က, G1, Oates J ကို2.
ယောက်ျားတစ်ဦးတိုးပွားလာသူတို့ရဲ့လိင်တံအရွယ်အစားနှင့်အတူမကျေနပ်ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏လိင်တံအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ဖို့အလှကုန်ပစ္စည်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှာကြသည်။ သို့သော်လျော့နည်းဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုစဉ်းစားရန်လူတို့သညျကိုသြဇာလွှမ်းမိုးသောလူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအချက်များနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။
အမျိုးသားများ၏လိင်တံအရွယ်အပေါ်ထားရှိသည့်သဘောထားအပေါ်တွင်သက်ရောက်မှုရှိသောလူမှုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအချက်များနှင့် ၀ င်ငွေတိုးပွားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်။
one-on-one Semi-စနစ်တကျအင်တာဗျူးများယခင်က penile တိုးပွားခံခဲ့သော6အရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ လူတို့သညျသူတို့လိင်တံအရွယ်အစားနှင့် penile တိုးပွားရှိခြင်းဘို့မိမိတို့တွန်းအားနှင့်အတူမကျေနပ်မှုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်ထင်သော sociocultural အချက်များအကြောင်းမေးခဲ့ကြသည်။ အားလုံးတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောပြီးတော့ဤနေရာတွင်ကူးရေးသောအသံခဲ့ကြသည်။ အင်တာဗျူးမှတ်တမ်းအကြောင်းအရာအလိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။
အင်တာဗျူးများမှအဓိကအကြောင်းအရာသုံးခုမှာ“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏လွှမ်းမိုးမှု”၊ “ ရွယ်တူချင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း” နှင့်“ သွယ်ဝိုက်သောရုပ်သွင်သွင်ပြင်နှင့်ဆိုင်သောလှောင်ပြောင်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများကညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများတွင်ယောက်ျားသရုပ်ဆောင်များ၏ကြီးမားသောပြစ်ဒဏ်များသည်ပုံမှန်လိင်တံအရွယ်အစားအပေါ်သူတို့၏ထင်မြင်ချက်ကိုအလေးမထားကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ အမျိုးသားအားလုံးသည်သူတို့၏လိင်တံအရွယ်အစားကိုရွယ်တူချင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လေ့ရှိသည်၊ များသောအားဖြင့်သော့ခတ်အခန်းထဲတွင်များပြီးရလဒ်အနေဖြင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်လိင်တံငယ်သည်မကြာခဏခံစားခဲ့ရသည်။ သင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူအားမျှ၎င်းတို့၏လိင်တံအရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်. တိုက်ရိုက်အနုတ်လက္ခဏာမှတ်ချက်များကိုလက်ခံရရှိပေမယ့်သေးငယ်တဲ့လိင်တံရှိခြင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းမီဒီယာရင်းမြစ်များအပေါ်ပြက်လုံးမှထိတွေ့မှုကနေမထီမဲ့မြင်ပြုတတ်၏အရင်းအမြစ်ခဲ့ကြောင်းသတိပြုမိခဲ့ကြလေသည်။
ဤသည် sociocultural အချက်များ၊ မီဒီယာနှင့်သက်တူရွယ်တူများအပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များသည်အမျိုးသားများ၏လိင်အင်္ဂါတိုးမြှင့်လိုသောဆန္ဒအပေါ်သြဇာသက်ရောက်နေသောအလားအလာရှိသောလူနာများနှင့်သူတို့၏ဆက်သွယ်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
Doi: 10.1093 / asj / sjz154